Iindaba-Iingcebiso zokungaxuthi uboya kwiijezi zoboya
1. Icebo lokuba iijezi zoboya zingalahli iinwele: Nyibilikisa icephe lesitashi kwisiqingatha samanzi abandayo, thambisa ijezi yoboya kwaye uyikhuphe ngaphandle kokuyijija, uyikhuphe kwaye uyibeke emanzini ngesixa esincinci sokuhlamba umgubo, cwina imizuzu emi-5. umnatha.
2. Kuya kwenziwa umaleko omncinci wesikali kwimbiza yealuminiyam okanye embizeni yealuminium emva kwethuba elithile. Beka izikhumba zeetapile ngaphakathi, yongeza inani elifanelekileyo lamanzi, ubilise, ubilise malunga nemizuzu eli-10, emva koko ususe.
3. Umgangatho wekhitshi uneoyile eninzi kwaye akukho lula ukuyicoca. Phambi kokurhuqa phantsi, unganyibilikisa umhlaba onamafutha ngamanzi ashushu ukuthambisa amabala, emva koko uthele iviniga kwi-mop, emva koko upheke phantsi ukuze ususe ukungcola okunamafutha emhlabeni.
4. Emva kokulayita iswitshi yegesi ukuze ilayite, ukuba idangatye liluhlaza, oko kuthetha ukuba irhasi ayitshisi ngokupheleleyo, nto leyo echitha irhasi. Ngeli xesha, kuyacetyiswa ukuba uhlengahlengise ivalve yolawulo lomoya kwindawo apho idangatye livakala khona.
5. Xa usebenzisa isifudumezi samanzi, kungcono ukulungelelanisa iqondo lobushushu phakathi kweedigri ezingama-50-60, ezinokuthintela ukwenziwa kwesikali sehitha yamanzi; xa ubushushu bamanzi budlula iidigri ezingama-85, ukuyilwa kwesikali kuya kunyuka.
Ixesha lokuposa: Meyi-10-2021
IYIWAPSAPP +86 18013785638
IDILESIUkwakha i-19, iNkokeli yesiqhelo, i-258 Shengpu Road, iSuzhou Industrial Park, kwiphondo laseJiangsu, China.